တရားစခန်း ပြီးသွားလျှင် မိမိအိမ်မှာ ဘယ်လို အားထုတ် သင့်ပါသလဲ? – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ကျေးဇူးပြု၍ မေးပါရစေ။ မြေဇင်းနည်းရဲ့ အဓိကအရာဟာအလင်း နိမိတ်ပါ။ အလင်းနိမိတ် ရပြီ ဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ဖို.တော်တော်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်မေးချင်တာက တရားစခန်း ဝင်ပြီး အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာ ပုံမှန်နေ့စဥ်ဘဝထဲပြန်ရောက်ရင် ဘယ်လို တရား မှတ်လဲ သိချင် ပါတယ်။ ဆိုလို ချင်တာက အလင်း နိမိတ်နဲ့ပဲ ဝိပဿနာမှတ်သလား? ဒီအ တိုင်းပဲဝိပဿနာကိုရှူ သွားသလား?။ဘာကြောင့် မေးရသလဲဆိုရင် ကျွန်တော် မြေဇင်းနည်း ကို ရင်းနှီးခဲ့တာကြာ ပါပြီ။ဝန်ထမ်း ဆိုတော့ တရားစခန်းလည်း မဝင်နိုင် ခဲ့ဘူးပေါ့။အိမ်မှာ ကျတော့ အားထုတ်မှုအားနည်းတော့အလင်း နိမိတ်ကမရ။မြေဇင်းနည်းမှာ အလင်းနိမိတ်မရရင် ရှေ့ဆက် ဖို.က မရ။အခုတော့onlineတရားစခန်းဝင်ဖို.စောင့်နေ ပါတယ်။ နိမိတ်မ ရခင်မှာ မြေဇင်း နည်း နဲ့ဝိပဿနာရှူလို့ ရ မရသိချင်တာပါ။နိမိတ် မရလည်း ဝိပဿနာကိုရှူလို့ရတယ်ဆိုရင် လမ်းညွှန် ပေးပါလို့ ကျေးဇူးပြု၍ တောင်းဆို အပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ သိပ်ကောင်းလွန်း တဲ့မေးခွန်း လေးတွေမို့ နီပွန် သေသေချာချာ လေးအသေး စိတ်လေး ရေးပေး ဖြေပေးပါ့မယ် နော်……….တစ်ခါ မှ တော့ မမေး ဖူးပါ ဘူး ခင်ဗျာ ပထမ နိမိတ် မြင်ပြီး ခိုင်သွား တဲ့အ ခါ ကျွန်တော် နားလည် ထားတာ က ပထမ စျာန် စဝင် သွားတယ်လို့မှတ် ထားပါတယ် ကျွန်တော် မေးချင်တာ က အဲရထားတဲ့ ပထမ စျာန်မှာ အလင်းနိမိတ် ကို လိုသလို့ စေ စားပြီးတော့ ဘုရား ဖူးတာတို့ ဘာတို့ လုပ်ရ တာလားဗျ နောက် အဆင့် တွေတက်ပြီး ဒုတိယ တတိယ စတုတ္ထတက်ပြီးမှ ပြုလုပ်ရတာလားမရှင်းလို့ပါဗျ အချိန်ရရင် ပြန်လည်ဖြေ စေချင် ပါတယ်ဗျ အလင်းနိမိတ် ထိ​တော့ နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် ရောက်ပါ တယ်မခိုင်သေး လို့လားမသိဘူး စုစည်းလို့မရဖြစ်ပြီး ပြန်ပြန်ပြီး လျော့ သွားပါတယ်ဗျဘာဆက် လုပ်ကြည့်ရမလဲဗျ……………..။
အထက်ပါ မေးခွန်း ၂ခု ကို ပေါင်း၍ဖြေ ပေးပါရစေရှင့်…၁)မြေဇင်းနည်းစနစ်ဟာ အလင်း နိမိတ် ကို စေစားပြီး ဘုရားဖူးတဲ့ နည်းနဲ့ သမာဓိကို နောက်တဆင့် ထပ်ပြီးမြှင့်တင်တဲ့သဘောပါသမာဓိ အပြင် သဒ္ဓါ လည်း ပါနေ သည်ပေါ့…..ဆိုကြ ပါစို့..အဝေးက ဘုရား တွေ လှမ်းပြီး ဖူးတဲ့ အခါမှာ ဝိတက်၊ဝိစာရ ၂မျိုးအလုပ် လုပ်ပါပြီ.. ပထမ… စိတ်က အာရုံဆီကိုညွှတ်နေခြင်းပါ..ဒုတိယ… က နောက်ပိုင်း ဖူးပြီး လို့မြင်ရတဲ့ ပုံရိပ်ကို အာရုံပြန်ပြု လို့ရနေ​ပြီ ဆို ရင် တော့ ပီတိ၊သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဖြစ်နေ ပြီမို့ စျာန်အဂ်ါတွေ ဖြစ်ပေါ် နေပါပြီ..အဲ့လို ဘုရားဖူး နေခြင်း သည်ပင် လျှင် စျာန်တွေကို ဖြစ်ပွား နေစေပါပြီ..ခိုင်စေရန် အလို့ငှာ ကျတော့ နောက်ထပ် သင်ခန်း စာတွေ နဲ့ တဆင့်ချင်း ဆွဲ တင်ပေးပါတယ်..ဥပမာ…ပါးဖောက်၊နားဖောက် တို့ လှီးစား ဖြတ်စား သင်ခန်းစာတို့ ရောက်သွား ရင် …အလင်းက ဖန်ရောင် မှန်ရောင်တို့ ကဲ့သို့ ဖြစ် ပေါ်လာပြီး ပထမစျာန် ကို ခိုင်သည်ထက် ခိုင် အောင် လေ့ကျင့် တဲ့ သဘော မျိုးပါ…အဲ့သလို လေ့ကျင့် ရင်း…. သမာဓိ စွမ်းအား သဒ္ဓါ စွမ်းအား တွေ ကြောင့် အဲ့ဒီ သင်ခန်းစာ တွေမှာ ရောဂါတွေ ပျောက်ကင်းသွားကြတာမျိုး ဖြစ်ကြ ပါတယ်. .တစ်နည်း ပဋိဘာဂနိမိတ်ဆိုတာ ပထမစျာန် ပါပဲ..အဲ့ဒီ စျာန်အထိ သမာဓိ ခိုင်နေရင်ကိုပဲ ဝိပဿ နာ ကူးပြောင်း ရှုမှတ်ပွားများလို့ ရနေပါပြီ..ဘာလို့ စျာန်တွေကို အသေးစိတ် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း မျိုး တွေ အဆင့်မတက်တော့ တာလည်း ဆိုရင်ဖြင့်….လုံလောက်တဲ့ စျာန်သမာဓိနဲ့ တင် ဝိပဿ နာကို ကူးပြောင်းရှုမှတ်ပွားများပြီး ဝိပဿနာ သမာဓိ ကို ယူလို့ရသွားလို့ပါရှင့်….တဆင့်ချင်းလို့ စကားအဖြစ် ပြောပေမယ့် တခါတလေ တရားအရမ်း ထက်တဲ့ ယောဂီများကတော့ အဆင့်ဆင့် တွေ တက်သွားကြတာ ရှိတက်ကြပါတယ်…စာအရ စကားအရ တဆင့်ချင်း လို့ဆိုပေမယ့် စိတ် ဖြစ်ပေါ်ပုံအဆင့်ဆင့် ကတော့ အင်မတန်ကို မြန်လွန်း လှပါတယ်။
အဓိက ဦးတည်ချက် သည် ဝိပဿနာ ကို ဦးတည်တာ မို့….စျာန်တွေကို ဝသီဘော် နိုင်နင်းအောင် အားထုတ် ရမယ့် အဆင့် တွေကို ဘုရားဖူး သင်ခန်းစာတို့ လို အခြားသော သင်ခန်းစာ တို့ လိုမျိုး တွေ ပေးပြီး နိမိတ်ခိုင်စေရန် လေ့ကျင့်သည့် သဘောမျိုးသက်ရောက် သွားပါတယ် ..အဆင့်တွေ ကို ချုံ့လိုက် တဲ့ သဘောပါ..နိမိတ် တွေရလာ ပြီး ဆိုတာနဲ့ ခိုင်အောင် လေ့ကျင့်ပေးပြီး ဝိပဿနာ ရှုမှတ် ပွားများ နည်းတွေကို ဉာဏ်စဥ် အလိုက် သင်ကြား ပေးသွား ပါတယ်..ဒီနေရာမှာ ရှုမှတ်သူ ယောဂီဖက်မှ အချက် ၂ချက်ကို ဝမ်းစာ ပြည့်အောင် ဖြည့်တင်း ပေးထား ရပါ သေးတယ်…..အဲ့ဒီ ဝမ်းစာများကတော့..၁) စိန်တာမယ ၂)သုတမယဉာဏ် ၂ မျိုးကို ရှိကို ရှိထားရပါတယ်..ဤ ၂ မျိုး ဝမ်းစာ ဖြည့်တင်း ထားတဲ့ ယောဂီဟာ……..ဤသို့ စျာန် ကို ခိုင်အောင် ပြုလုပ် ပြီး ဝိပဿနာ ကူး လိုက်တာနဲ့ ရုပ် နာမ် ဓမ္မ သင်္ခါရ သဘောတရား တွေကို ဖြိုင်ဖြိုင် မြင်သွား ရပါတယ်…ဒီ ၂ ဉာဏ် အတွက် သင်ကြား ပေးသူ ဆရာ သမားများ ဖက်က မတတ် နိုင်ပါ….အထိုက် အလျောက် မျှသာ တရား ဟောပေးခြင်းမျိုးသာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ကြပါသည်..။
ယောဂီ ဖက်မှ…(၁၊ မိမိတို့ဘာသာ တရားတွေနာကြားရပါမယ်) (၂၊ တရားစာတွေ ဖတ်ရှုလေ့လာ မှတ်သား ရပါ မယ်) စိန္တာမယ နဲ့ သုတမယ ဉာဏ် ၂ခု က ၅၀ % လောက် ခ ရီး ပေါက် ပါ ပြီ ကျန် ၅၀% ကို ယခု နည်း စနစ် များဖြင့် သင်ကြား ပေးသော အားထုတ် နည်း ကို ပေါင်းစပ် လိုက် ရင် ၁၀၀ % ဖြစ်သွားတဲ့ သဘောပါပဲ…သမထ ဝိပဿနာ ယာနိက နည်းဟာ သမထကို ထူထောင်ပြီး သွားရတာမို့…ကိုယ်စောင့် ကမ္မဌာန်း ၄ခု ကိုလည်း နည်းစ နစ်တကျ အားထုတ် တတ်ဖို့ ကိုလည်း သင်ကြား ပေးထား ပါသေး တယ်…ထို အကူ ကမ္မဌာန်း ၄ ခု စလုံးဟာ တခု နဲ့ တခု အကျိုး သက် ရောက်မှု ခြင်း မတူ ကြ ပေမယ့်.. အရေးပါ ပုံခြင်းကတော့ဖြင့် တူကြ ပါတယ်..ထိုကမ္မဌာန်း ၄ ခု ထဲတွင် စတုတ္တစျာန်အထိ တက်နိုင်တဲ့ ကမ္မဌာန်း လည်းပါနေပါသည်။ဒါကြောင့် စျာန်အဆင့်ဆင့် တက်လှမ်း သွားနိုင် ဖို့ရာ မှာ ဤ သို့သော ကိုယ်စောင့် ကမ္မဌာန်း များ အကူ အညီ ဟာဖြင့် ဘယ် တော့ မှ လက်လွှတ်လို့ မရပါ..ဆိုကြပါစို့…ဝိပဿနာပိုင်းရှုပွားနေတဲ့အချိန် သမာဓိ ကျလာ လို့… တနည်း စိတ်ပျံ့လာလို့ ရှိရင်…ဤ ကမ္မဌာန်း ၄ ခု ကို တခုခု ဆင်ခြင်ပြီး ပွားများ လိုက်တာနဲ့ စျာန် ပြန်ရလာပြီး.. ဝိပဿနာ ပြန်ရှုမှတ် လို့ရသွားရပါတယ်..ဤနေရာတွင် ဝိပဿနာ ပိုင်း ရောက်ရင် အလင်းဆို တာကို အာရုံမ ယူတော့ပါဘူး..အလင်းလို့ အာရုံယူမိရင် ရုပ်နာမ် တွေမမြင်ပဲ အလင်း ကိုသာ မြင်နေ ပါလိမ့်မယ်…သို့ကြောင့် အလင်းဟာ နိမိတ်စေစား တဲ့အချိန် မှာပဲ သူ့ကို သတိပြု အာရုံယူရပါတယ်..အလင်းမရလို့ ဝိပဿနာရှူပွားလို့ မရတာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဆိုလိုခြင်း ပါရှင်. ..စိတ် ၏ သဘော သည် အမြဲ ခိုင် မြဲနေ ခြင်း မဟုတ်သည့် အတွက် ကြောင့်..စိတ်မှာ မည်သည့် emotion တခုခု ဝင်လာတာနဲ့ ဒီ အတိုင်း ရှုမှတ်မှု ကမ္မဌာန်း ကို ဖြုတ် လိုက်စရာ မလိုပဲ.. အကူ ကမ္မဌာန်းများဖက်ကို ပြောင်းပြီး ဝင်စားပေးခြင်းဖြင့် ဆက်လက်ရှုမှတ် ပွားများလို့ရနေပါတယ်။
သမထ ပိုင်း သီးသန့် ဝိပဿ နာ ပိုင်း သီးသန့် ရယ်လို့ မ ဟုတ် တော့ပဲ…….လွန်းခက် ရှုသ လိုမျိုး ဝိပဿနာ နဲ့ သမထ ကို တလှည့် စီ ရှုမှတ် ပွားများ အားထုတ် သွားရ ပါတယ်.. တချို့ဆရာတော် ဘုရားကြီးများက စစ်တိုက်တဲ့ ဥပမာ နဲ့ ပေးကြပါတယ်..ရုက်နာမ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုပဲ မြင်လာတာ ကြာတော့ ရှုမိတာ ကြာတော့ ငြီးငွေ့ တဲ့ သဘောမျိုးလေး ဖြစ်ပေါ် လာရင် သမထ ကို ပြောင်းပြီး စျာန် နဲ့ အနား ယူတဲ့ သဘောမျိုး လို့.. ဆို ပါတယ်.. စစ်ထွက်တိုက်လိုက် မောလာလိုက် ခဏ နား လိုက် ဆိုသ လိုမျိုး…လို့… ဥပမာ ပေးကြ ပါတယ် ..တနည်း အားဖြင့် လည်း တဏှာ အစေး ကပ် စေးစေး လေး နဲ့ သွားရ ခြင်းမို့ လှေ ၊သင်္ဘော နဲ့ ဟို ဘက်ကမ်း ကို ကူး သလို မျိုးလို့ တင်စား ကြ ပါတယ်…..အဲ့ဒီလို ရှုမှတ် တဲ့အခါ မျိုး ကျရင် တော့…အလင်း ကို အာရုံ ပြုပြီး အလင်း နိမိတ် ထဲ ဘာဝနာ စိတ်ကလေးကို စိုက်ထားရင် စျာန်စိတ် ဖြစ်နေပြီးတော့ သမထ ဖြစ်နေပါတယ်..သမထ ကနေ ဉာဏ်ဖက် ကို ကူးပြောင်း ရှုမှတ် လိုက်ရင် တော့ ဝိပဿနာ ဉာဏ် ဖြစ်သွား ပြီး ဝိပဿနာ ဖြစ်သွားရ ပါတယ်…(စာပေတွေ မှာ အသေးစိတ် လေ့လာဖတ်ရှုဆည်းပူးနိုင်တာမို့ ဤနေရာတွင် အကျယ်တဝံ့ ရေးမပေးတော့ပါဘူးရှင့်..)ထို့ကြောင့်…ဤနည်းစနစ်ကို သေချာနားလည် သဘော ပေါက်ခဲ့မယ် ဆိုရင်ဖြင့်..အင်မတန် ရိုးရှင်းလွယ်ကူ မြန်ဆန်တဲ့ သမထဝိပဿနာ တရားပွားများ ရှုမှတ်ခြင်းကို သင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါရှင့်…။
မှတ်ချက်။ ။ ဖြတ်လမ်း နည်းတော့ မဟုတ်ပါရှင့်.. ပွားများနည်းရှု မှတ်နည်းများကို အဆင့်ဆင့် သိရှိ သွားပြီ ဆိုရင် တော့…..မိမိ တို့ အိမ်မှာ အမြဲ တစေ ရှုမှတ် ရမှာ ကတော့…. (၁၊ ပရိကံယူပါ) (၂၊ မေတ္တာပို့ပါ) (၃၊ ကိုယ်စောင့် ကမ္မဌာန်း) များကို မိမိတို့အ ချိန်ရသလောက် ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာပြီး ပွားများပါ (တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချိန်ပေးပုံခြင်း မတူကြ လို့ပါ) အတိ အကျ သတ်မှတ် ချက်ရယ် လို့မ ရှိပါ..စာရေးသူ ဆိုရင် တခါ တလေ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း တခု တည်းနဲ့ ၁နာရီ ကျော် သွားပါတယ် (ဤသည်ကား ဥပမာ) (၄၊ ဝါယူဝါမှတ် ကို သမာဓိ အလင်း ရ လောက်သည် အထိ ပွားများပါ (တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး သမာဓိ တက်ပုံခြင်း မတူ နိုင်တာမို့ မူသေသတ်မှတ် ချက်မရှိ ပါ ) သမာဓိအတော်ရလာပြီဆိုတာနဲ့ဝိပဿနာကို မိမိရောက်ရှိနေသော ဉာဏ်အဆင့်က နေစတင် ရှုပွား ပါဥပမာ ဆိုပါစို့.. ဥဒယဘယ ဉာဏ်ထိ ရောက်နေသော ယောဂီ က ဖြစ် ပျက်ဉာဏ် ကနေ စတင်ရှုပွားပါ..ဤနည်းစနစ်ကို သင်ထားသော ယောဂီများက ရှုပွား တတ်နေပါပြီ. .မိမိကဘယ် ဉာဏ်စဥ် ရောက်နေလဲ ဆိုတာ မိမိ ဖာသာ ဆုံးဖြတ် ရပါတယ်….ဆရာတော်တွေက အကုန်သင် ကြားပေးပြီးသားမို့ ကိုယ့်ဉာဏ်အဆင့် ကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ချင့်သိပြီး ဆက်လက် ပွားများရပါမယ်.. ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ ဆက်ပွားရပါမယ်..စျာန်ဆို တာမျိုးကတော့ လျောကျ တက်ပါ တယ်.. ဝိပဿနာ ကတော့ မလျော ကျ တက်ပါ..ရောက် နေတဲ့ နေရာကနေ ပဲ ပြန် ပြန် ရှုမှတ်ပြီး သား ဖြစ်နေ ပါတယ်..ထိုသို့ သမထ ဝိပဿနာ ရှုပွား နည်းလေးကို အစဥ်လိုက် ရှုမှတ် ပွား များရ ပါ သည်။
ခြွင်းချက်။ ။ အကယ်၍များ ယောဂီသည် သမထကို ဝသီဘော်တွေ နိုင်နင်းအောင် လေ့ကျင့် ချင် သူများ ဖြစ်ခဲ့ပါ လျှင်လည်း ..သမထ သီးသန့်ကို လေ့ကျင့်အားထုတ်လို့ရပါသည်..သမထအပိုင်း ကမ္မဌာန်း ၄ခု တွင် မေတ္တာကမ္မဌာန်း ကို စျာန်ဖြစ်သည်အထိ အသေးစိတ် ရှုမှတ် ပွားများ နေလို့ လဲရ ပါသည်။ ဤအရာများ သည်ကား ဆိုရင် ဖြင့်…ယောဂီ တဦး ချင်း၏ စရိုက် သဘာဝ နှင့် အ ကြိုက် များသာဖြစ် ခြင်းကြောင့် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးလုံးဝ လုံးဝ မတူညီ နိုင်ကြပါ…… ဒါကြောင့် တရားပွဲ သိမ်းပြီ ဆိုသောနေ့ တွင် ဆရာတော် ဘုရား များမှ မိမိတို့ ကြိုက် နှစ်သက်ရာ နည်းစနစ် ဖြင့် တရားများကို ဆက်လက်ပွားများ အားထုတ်ကြပါကွယ် လို့.. ဆုံးမစကား လေးဖြင့်… အဆုံး သတ် ဟောပြောလေ့ရှိကြပါသည်။ ဒီနေရာလေးတွင် စာရေး သူဖြည့်စွက် ပြောပါရ စေရှင့်…(တရားရှုမှတ် ပွားများ သူသည် ကြိမ်ဖန် များစွာ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ရှုမှတ် ပွားများ မှသာ လိုရာ ခရီး ရောက် နိုင်တာပါ)တခုတော့ သတိပြု မိစေချင်ပါသည်…ကမ္မဌာန်း အားထုတ်သည့် ယောဂီသည် ထိုင်သည့် ဣရိယာပုတ်တမျိုးထဲကိုပင် တရားအားထုတ်လို့ရသည်ဟု မထင်မှတ် ထားစေချင်ပါ ရှင့်..ဒီအချက်ဟာ အင်မတန်မှကို အရေးကြီးလွန်းလှတာပါ..သို့ကြောင့် ဣရိယာပုတ် ၄ပါးစလုံး မှာရှုမှတ် ပွားများတက်အောင် လေ့ကျင့် ပေးနေရပါမယ်… ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့လျှင်… ထိုင်မှ တရား ရှုမှတ် လို့ ပဲရတယ် လို့ ထင်သွားတော့ ထိုင်တဲ့ အချိန် တရားဖြစ် ကျန်တဲ့ အချိန် မတရား ဖြစ် သွားတတ် ကြပါတယ် ရှင့်..ကိလေ သာကြား ခိုလိုက်တာ နဲ့ မတရား ကိန်းပါပြီ..။
ထို့ကြောင့် ဤသည်ကား ဆိုရင်ဖြင့် အထူးအထူး သတိပြုရန် အချက် ပါပေတည်း…. မေးစရာ တခုရှိလာပါပြီ ဤနေရာလေးတွင်…ထိုင်ချိန်မဟုတ် သည့် အချိန်များဘယ်လိုများ တရား ရှုမှတ် ပွားများနေရပါမည်နည်း..? ဟုတ်ပါသည်… ဤမေးခွန်းသည် အင်မတန် လိုအပ်ပါသည်… ထိုင် ချိန်မ ဟုတ်သော ကျန်အ ချိန်များကိုတော့..ယောဂီ တို့၏ စရိုက် သဘာဝနဲ့ ဉာဏ်ပေါ်မူတည် ပြီး သမထ ကြိုက်တဲ့သူက သမထ ရှုမှတ်လို့ ရသလို ဝိပဿနာကြိုက်သူက ဝိပဿနာ ရှုမှတ်နိုင် ပါ သည်။ တခု သတိထား ရမည်က..သမထ လည်း မဟုတ် ဝိပဿနာ လည်းမကျ ဇော်ကန့်လန့်မျိုး မဖြစ်အောင်တော့ တခုခုကို သေသေ ချာချာ လေး စွဲစွဲမြဲမြဲ ရှုပွားဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါ သည်။ ဥပမာ ဆိုကြ ပါစို့…လမ်းလျှောက် နေတဲ့ အချိန် မျိုး အရဟံ ဂုဏ်တော် ပွားနေသူက သမထ အားထုတ် နေတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်..ယောဂီက ဉာဏ်မလိုက်နိုင်သေးလို့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မျိုး မှာ ဝိပဿနာ မပွားများ တတ်သေးရင် သမထ ကို ပွားများနေ လို့ရသလိုမျိုးပါ…( ဒါလေး က ဥပမာ တခုပါ…)ဒီတော့ အနှစ်ချုပ် လိုက်ရင်…မိမိတို့ ၏ စိတ်မှာ ကိလေသာ တွေကို ဖြစ်ခွင့် မရှိအောင် တခုမဟုတ်တခုနဲ့အစားထိုးနေတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ…ဉာဏ်ပေါ် မူတည်ပြီး မိမိအား သန်ရာ သန်ရာ ရှုမှတ်ပွားများနေလို့ရပါတယ် လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ…။
စိတ်မှာ ကိလေသာ ကြားမခို မှ ကိလေသာ တွေ တ ဖြည်းဖြည်း ပါးပါး လာပြီး နောက်ဆုံး ….မှာ ကိလေသာ ကုန်တဲ့ နေရာ လေးကို အာရုံပြု မိသွားမှာပါ..ဒီလို ကိလေသာ တွေကုန် ဖို့ဆိုတာဟာ ကိလေသာ တွေကို တ ဖြည်းဖြည်း ပါးအောင် နည်းအောင် လုပ်ပေး နေရပါတယ် ….သူ့ အလိုလို ချက်ချင်း ကုန်သွားတယ် ဆိုတာ မရှိပါရှင့်…အကူ ကမ္မဌာန်း တနည်း ကိုယ်စောင့် ကမ္မဌာန်း တွေ ဟာ ကိလေသာ တွေကို ပါးအောင် လုပ်နေ ခြင်းမျိုး ပါ…….အကြမ်းစား အလတ်စား ကိ​လေသာ တွေကို သတ်နေ ခြင်းပါပဲ..ဝိပဿနာ ကကျတော့ အနုစား ကိလေသာတွေကို သတ်ခြင်းပါ… ထို့ ကြောင့် သမထ ဝိပသနာ အားထုတ် ခြင်းဟာ ကိလေသာ ကုန်ဖို့ ကို အင်မ တန်မှ ကို အထောက် အပံ့ပေးတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ကိုယ်တော် တိုင် ကျင့်ကြံ အားထုတ် ခဲ့သော နည်း စနစ်ကြီး ပါပေ တည်း… သုဒ္ဓဝိပဿနာ ကိုတော့ ယောဂီတိုင်းလိုလို သိပြီး ကြပြီမို့ ရေးမပေးတော့ပါရှင့်… ရှေးဆရာတော် ကြီးများက သမထ ဝိပသနာ ကျင့်စဥ် များ ကိုတော့ ကိုယ် တိုင် ကျင့်ကြ ပါ သည်….. သို့သော် ယောဂီများကို​တော့ သုဒ္ဓဝိပဿနာ နည်းများဖြင့်သာ တရားနည်းပေးကြတာ များပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်… သမထယာနိက နဲ့ အားထုတ် လျှင် ဆရာက လိုကို လိုအပ်ပြီး အသေး စိတ်လမ်းမချော်သွားအောင် တည့်မတ်ပေးရသောကြောင့်ပေတည်း…(ဤသည်ကား…ဗဟုသုတ ဖြစ်ပါသည်)သမထပိုင်းတွင် နိမိတ်များရလာပါက ဆရာမရှိပဲ အားထုတ် သောယောဂီများ သည် နိမိတ် တွေကို ကစား ခြင်း နိမိတ်တွေ ပေါ်သာယာခြင်း စသဖြင့် ပညတ်အာရုံတွေပေါ်မှာ သောင် တင်ပြီး လမ်းချော် သွားတတ် ကြပေသည်……..စာရေး သူတုန်းက လက်တွေ့ပါပဲ နိမိတ် တွေကို ကစား ရတာ အင်မတန် သာယာ ခဲ့ပါတယ်.. ပျော်လည်း အင်မတန် ပျော်ရ ပါတယ် ..သို့ သော် စာရေးသူမှာ ဆရာသမား နှင့် အနီးကပ် ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရသည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်… အိမ်ပြန်မည့်နေ့တွင်…ဆရာတော်မှ မှာကြားသည့်စကားတခွန်းက…ဒကာမကြီး… အလင်း နိမိတ် မှာ မသာယာ နေ နဲ့ နော်…တဲ့ ….. အဲ့လိုလေး အမှာ စကားရှိလိုက် ပေသည်…ဆရာသမားက သိပေ သည်ပေါ့… ထို့ကြောင့် စာရေးသူ ကလည်း စကားနား ထောင်ပါသည်… အလင်း နိမိတ် များပေါ် မသာယာ ခဲ့ပါ…ဤ သည်ကား… ကိုယ့်တွေ့ တခုလေးပါ ….ထို့ကြောင့် မေးထား သော မေးခွန်းများအရ… အတော် အသင့် ရိပ်မိသွားကြမည်ဟု စာရေးသူ ယူဆမိပါသည်ရှင်
ခြုံပြီးသုံးသပ် လိုက်ရင်တော့ သမထဝိပဿနာ ရှုပွား နည်းစနစ်ကို ချုံ့ပြီး လေ့ကျင့်ပေးထါး တာ လို့ပဲ အ​ဖြေထွက်လာပါတယ် ။ လွယ်ကူတဲ့နည်းစနစ်လေးတွေသုံးပြီး တရားအား ထုတ်နည်းကို စနစ်တကျ အားထုတ်တက်အောင် သင်ပေး လိုက်ခြင်းပါပဲရှင်…ထို့ကြောင့်… .#အိမ်မှာ ဘယ်လို အားထုတ်သင့်သလဲ #ထိုင်စဥ် မဟုတ်တဲ့အချိန်ဘယ်လို အားထုတ်သင့်သလဲ စသော စသော မေးခွန်းများကိုပါ..တပါတည်း အဖြေ ပေးပြီးသား ဖြစ်သွားနိုင်ပါပြီနော်. စာလည်းအရမ်း ရှည်နေပြီမို့…လိုအပ်သေးသည်ဟု မေးစရာများရှိသေးခဲ့ပါလျှင် cb မှာ စာချန်ပေးခဲ့ပါဦး ရှင့်.. ..စာရေးသူအားတဲ့အချိန် ပြန်ဖြေ ပေးထားပါ့မယ် ရှင့်…I love you all အစ်မပြော တဲ့နည်း အတိုင်း ဆက်လုပ် သွားရင် ဘယ် အဆင့်ထိ ရောက်နိုင် လဲ ဟင် အစ်မ ချပြတဲ့ မြေဇင်း နည်း ကိုတော့ သဘောကျ နေပြီဉာဏ် ပေါ်မူတည် ပါတယ် sis.တရားအားလုံး ကတော့ ကိလေ သာ ကုန်ခမ်း အောင် ကျင့်ရ တဲ့ နည်းတွေ ကြီးမို့ မိမိ ဉာဏ်မှီ သလောက် ရနိုင် ပါတယ် ရှင့် ဤ မေးခွန်းလေးအတွက်လည်း အထက်ပါ အဖြေများကို ဖတ်ရင်းဖြင့် ချုံငုံမိ သွားမယ်လို့ ထင်ပါ တယ် ရှင့် ..သိသလောက်လေးဖြေပေးလိုက်ရပါတယ် ရှင့်.. ယောဂီ အားလုံး တရားတွေ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။
Nippon San(Facebook မှ ကူးယူး ဖော်ပြ ပါသည်။)